SERIE A: Inter Milan oo kaalinta saddexaad ee horyaalka kala baxday kooxda Roma, inkastoo ay barbaro kala kulantay Bologna iyo kulamadii kale ee la ciyaaray… + SAWIRRO – Gool FM
Haaruun September 25, 2016
(Milano) 25 Sebt 2016 – Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kaalinta saddexaad ee horyaalka Serie A kala baxday Roma, inkastoo barbaro 1-1 ay kala kulantay naadiga Bologna oo marti ahayd.
Inter Milan ayaa gool looga naxsaday kaddib markii xiddiga Bologna ee Mattia Destro uu ugu shubay 14’daqiiqo bilowgii ciyaarta, kaddib caawin uu ka helay Simone Verdi, 1-0 ayaana lagu hoggaamiyey kooxda martida loo ahaa ee Inter Milan.
Bologna ayaa sheekadaas laga diiday waxaana goolka barbaraha u dhaliyey Inter Milan Ivan Perisic 37’daqiiqo kaddib markii uu kubbad dhul ma dhacdo ah dhaliyey markii uu karoos wacan ka helay Antonio Candreva, kulanka ayaana lagu kala nastay gar isku mid ah 1-1.
Ivan Perišić oo goolka barbaraha u dhaliyey Inter Milan ayaa goolkaasi waxa uu ahaa goolkiisii 7-aad oo uu ka dhaliyo horyaalka Serie A sanadka 2016, waxaana kaliya ka badan Mauro Icardi oo 15 gool u dhaliyey Inter Milan mudadaas.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay ayey labada dhinac fursado isku heleen laakiin labaduba waa ay ku guuldarreysteen inay gool dhaliyaan, kulankii ka dhacay garoonka San Siro ayaana waqtigii loogu tala galay ku soo dhammaaday barbaro 1-1.
Kooxda Inter Milan waxa ay kaalinta saddexaad ee kala horreynta horyaalka ka tuurtay Roma iyadoo leh 11-dhibcood, halka Roma ay u soo dhacday kaalinta afaraad ayna leedahay 10-dhibcood.
Kulamadii kale ee la ciyaaray horyaalka Serie A oo haatan dhammaaday natiijooyinkii ka soo baxay ayaa ahaa sidan:-
MUUQAAL: Neymar oo ka ooysiiyay taageere ka soo hor-jeeda
Dekedda oo taako loo dhigay kullankii ugu horeeyay koobka Janeraal Daa’uud